Soomaaliya, 17 November 2019
Xisbiga Wadani oo ku Baaqay Mudaaharaad Degdeg ah
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Waddani Cabdiraxman Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga ee gobolka Maroodijeex inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magalada Hargeysa.
Miisaaniyadda Somaliland oo la Ansixiyey
Golaha wasiirada ee Somaliland ayaa maanta ansixiyey miisaaniyad sanadeedka ay Somaliland ku shaqeyn doonto sanadka soo socda ee 2020-ka. Golaha wasiirada ayaa dhanka kale bogaadiyey heshiis laga gaaray colaad ka taagneyd deegaanka Ceel Afweyn.
Alshabab Weeraray Deegaanka Calamada
Wararka naga soo gaadhaya degaanka Calamada oo u dhexeeya Muqdishu iyo Afgooye ayaa sheegaya in maleeshiyaad la tuhunsan yahay inay ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen baabuur ay leeyihiin ciidamada amniga Soomaaliya oo maraysay jidka Afgooye
Boorama: Maxaabiis Baxsatay
Maxaabiis dhowr ah ayaa maanta la sheegay inay ka baxsadeen maxkamad ku taalla magaalada Boorama ee Gobolka Awdal, xilli uu halkaasi ka dhaceyey dhagaysigooda oo la xiriiray in rabshado ka dhacay magaalada Boorama saddex bilood ka hor ay ka dambeeyeen
M. Biixi oo Eedeeyey D. Federalka Somalia
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi ayaa ku eedeeyey Dawladda Federaalka Somalia inay ka danbeyso qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ee Somalia
Dawladda Somalia oo Qabatay Alshabab Weerar Geystay
Bilihii u dambeeyay waxaa soo kordhayay rag ka tirsan al-shabab oo ku fashilmayay weeraro ay markii hore la baxsan jireen, iyada oo dhawaan dhalinyaro Al-shabab ka tirsan oo hubeysnaa oo askari dilay lagu qabtay degaanka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo ay ku jiraan heshiiska Somalia iyo Kenya, doorashada guddoomiyaha cusub baarlamaanka ee Puntland iyo qoddobo kale.
Heshiis dhex maray Somaliland iyo Jabhad ka jirtay Awdal
Waxgaradka iyo Aqoonyahanka gobolka Awdal ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan koox dhawr maalmod ka hor kaga dhawaaqay magaalada Boorama inay yihiin Jabhad ka soo horjeeda xukuumada Somaliland.
Faaqidaadda: Sidee isku waafaqayaan sharciga doorashada iyo dastuurka?
Cawad oo faah-faahiyey kulankii Farmaajo iyo Uhuru
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faah-faahin ka bixiyey kulankii ay maanta magaalada Nairobi ku yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Kenay Uhuru Kenyatta.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaasi oo qodobo ay ku heshiiyeen.